नमूना स्वास्थ्य केन्द्र नै चिकित्सकविहीन, कतिदिन शव कुरेर बस्नुपर्ने ? – उजेली न्यूज
नमूना स्वास्थ्य केन्द्र नै चिकित्सकविहीन, कतिदिन शव कुरेर बस्नुपर्ने ?
प्रकाशित मिति : २१ पुष २०७६, सोमबार ०२:४३
बाजुरा, २० पुष
पूर्वीउत्तरी क्षेत्रको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन बनेको छ । स्वास्थ्य सस्थामा कार्यरत चिकित्सक गणेश चौधरी समायोजन भइ अन्यत्र गएपछि स्वास्थ्य केन्द्र चार महिनादेखि चिकित्सकविहीन बनेको हो ।
अहिले स्थानीयवासीले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । हिमाली गाउँपालिका–७ बाधुको कालापडा भिरबाट सडक दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएकाको शव स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको चार दिन भएको छ । चिकित्सकको पर्खाइमा आफन्तजन रहेका छन् । शव परीक्षण हुन सकेको छैन । कालापडा भिरबाट कर्णाली नदीमा बिहीबार जिप खस्दा चार जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा आफन्त चार दिनदेखि शव कुरिरहेका छन् । शव सड्ने अवस्थामा पुगिसकेकाे छ । नागरिक अगुवा जनेश भण्डारीले भने, “कोल्टीमा चिकित्सक भएको भए बिहीबार नै शव परीक्षण गरेर आफन्तले काजकिरीया शुरु गरिसक्थे । आजसम्म शव कुरिरहनु पर्दैनथ्यो ।”
नमूना स्वास्थ्यचौकीका रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ । बूढीनन्दा नगरपालिका–१ का बडा अध्यक्ष नृपराज खत्री नमूना स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा उपचारका लागि महङ्गो हवाईभाडा तिरेर नेपालगञ्ज जानुपर्ने बिडम्बना रहेको बताछन् । वर्षात्ले मार्तडी कोल्टी अवरुद्ध हुँदा समदरमुकाम मार्तडीलगायत अन्य ठाउँमा लैजान पनि समस्या भएको छ । बाजुराको हुम्ला, मुगु र कालिकोटका ५० हजार जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य केन्द्रले सेवा दिँदै आएको छ ।
जिल्ला अस्पताल बाजुराले परीक्षणका लागि डा राजु जोशीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली शनिबार बिहान मात्र कोल्टी क्षेत्र पठाएको छ । से१ज १०६४ नंको जिप दुर्घटना भएर कर्णाली नदीमा खसेको थियो । जिप हिमाली गाउँपालिकाको धुलाचौरबाट कोल्टीतर्फ आउँदै गरेको थियो ।
Previous: जेएनयूमा नकाबधारी छिरेर अन्धाधुन्ध हमला- कैयौँ विद्यार्थी घाइते
Next: पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति देउवा निवास जाने, निर्णय सच्चाउन माग गर्ने